Heavy truck Hino air filter AF25450 manufacturers kunye suppliers | UHertz
Heavy truck Hino umoya lokucoca ulwelo AF25450
Isikhuselo kunye nesitshixo sisebenzisa iiLogo zethu ukusetyenziselwa intengiso yaphesheya.Sikholelwa ukuba umgangatho bubomi beshishini elinye kwaye inkonzo idala ikamva. Wamkelekile abathengi kwihlabathi liphela ukuba banxibelelane nathi.
Buyisela IFleetguard: AF25450Sakura: A-1317INHINO: 17801-2960 S1780-12960 17801-2830NISSAN: AY120-HD501
Ububanzi Ukuphakama kukonke: 370mmEnd 1 OD: 274mmEnd 2 OD: 273mmEnd 1 ID: 153mm
Owona msebenzi uphambili wenkampani: singabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokucoca imoto, oomatshini bokwakha, iiseti zejenereyitha zedizili, iiyunithi zesiguquli somoya kunye nezinye izixhobo zoomatshini (isihluzi seoyile, isihluzi sedizili, isahluli samanzi seoyile, icebo lokucoca amanzi, icebo lokucoca umoya, icebo lokucoca ulwelo Iifilitha, kunye nezinye iintlobo zeefilitha zeoyile).
Ngezixhobo eziphambili e-China kunye nezinto ezilungileyo ezingeniswa elizweni okanye zasekhaya, sivelisa amacebo okucoca aphezulu kunye namaxabiso ahlukeneyo. Isidlulisile isiqinisekiso somgangatho we-ISO 9001 wamazwe aphesheya kunye nesatifikethi solawulo lwe-IATF 16949.
Iimveliso zethu kumazwe angaphandle kuMbindi Mpuma, mpuma Asia, eAfrika, kunye noMzantsi American, nto leyo eye igama elihle ukusuka ekhaya nakumazwe aphesheya. Ngokusekwe kumgaqo "wentsebenziswano yentembeko, ukuxhamla ngokufanayo kunye nolawulo oluzinzileyo" Sikunika ukusebenza okuphezulu, ukonga umbane kunye nemveliso enobuhlobo ukukhusela injini yakho.
Iinkcukacha zokupakisha: Ukupakisha okungathathi hlangothi ngaphakathi, ityala leplanga ngaphandle, okanye ukwenziwa kwesiko ngokwesicelo.
Iinkcukacha zokuHanjiswa: Ngokubanzi, kwiintsuku eziyi-7 zokusebenza emva kokuba ufumene intlawulo yakho.Kodwa ukuba ungxamisekile, singakunika elona xesha liqinisekileyo lokuhambisa ukuhlangabezana nemfuno yakho.
•Iimveliso zethu zisetyenziswa ikakhulu koomatshini bokwakha, ubuchwephese bezolimo, iilori zeheacy, iibhasi, izixhobo zomoya, idizili kunye nezixhobo zemigodi.
Egqithileyo Icebo lokucoca ulwelo Ihowuliseyili yehepa yemoto ye-excavator yemoto AF4930
Okulandelayo: Truck truck diesel filter air AF25444 AF25031